All ụzọ nyefee iTunes ọzọ Computer
1.2 jikota iTunes Libraries
1.3 Hichaa iTunes Library
1.4 Hichapụ iTunes Library
1.5 Dezie iTunes Library
1.6 Idozi iTunes Library
1.7 Tọgharia iTunes Library
2.1 Wepụ oyiri ihe
Ma gụọ 2.3 Multiple iTunes Libraries
2.1 Nyefee iTunes Library
2.2 mmekọrịta iTunes Library
Ma gụọ 2.3 iTunes Library ọnọdụ
3 ndabere & Weghachi
3.1 ndabere iTunes Library
3.2 Weghachi iTunes Library
3.3 wughachi iTunes Library
3.4 Naghachi iTunes Library
Akpụ akpụ gị iTunes n'ọbá akwụkwọ site na otu kọmputa ọzọ pụrụ iyi ka a na-akụda ọrụ. Nke a pụrụ ịpụta na ị na-ma-akpụ akpụ na a ọhụrụ MAC ma ọ bụ nanị ịmafe akụrụngwa gị nke ị mmekọrịta gị na iOS ma ọ bụ iPod. Usoro nke aga banyere nke a transfer bụ naanị dabeere na ole na ole nzọụkwụ nke i nwere ike iji nyefee gị data. Anyị ga-eduzi gị na ole na ole dị mfe nzọụkwụ na-esi na-aga banyere usoro a.
Usoro 1: Direct Nyefee site Migration nnyemaaka
Method 2: Nyefee iTunes music ọzọ Computer na TunesGo
Method 3: Nyefee Site na-ere ọkụ a CD / DVD
Ọ bụrụ na ị na-migrating ka a MAC si a Mac, gị mma nzọ bụ iji OS X si Migration nnyemaaka. Nke a nnyemaaka-enyere gị aka na-akpaghị aka nyefee gị data. Na mbụ mkpa ka ị pịa na "usoro mmasị" na-aga nhọrọ nke "òkè." Mgbe na n'aka na nhọrọ nke "File òkè."
Ugbu a ịgbanwee gaa na MAC ị na-enyefe gị data ka. N'ime ebe a ị ga-ahụ gị ochie MACs adreesị pụtara ná nnwekọrịta ngalaba nke Finder sidebar. Họrọ ya site na ịme ọpịpị na ya na pịa Jikọọ dị ka.
Ị ga-abịa ihu na ihu ihe ịrịba ama na-dialog. Tinye aha aha njirimara na paswọọdụ, na enweta jikọọ.
Ị nwere ike ugbu ịnyagharịa ka Music na akara ngosi na dialog nke na-egosi gị ochie Macs faịlụ usoro. Ị nwere ike ịdọrọ dum iTunes nchekwa otu ọnọdụ na ọhụrụ gị Mac
Nke a bụ ụzọ ọzọ nke na-ebufe gị faịlụ na song ka a ọhụrụ kọmputa na enyemaka nke a software maara dị ka Wondershare TunesGo. Ị pụrụ nanị ibudata a software na mgbe ahụ na-eso nyere nzọụkwụ:
Nyefee gị data gị iPhone, iPad ma ọ bụ iPod azụ n'ime gị iTunes
Mmekọrịta na nyefee gị iTunes n'ọbá akwụkwọ gị Android ngwaọrụ
Download na ndekọ music si online weebụsaịtị.
Nyochara na ọcha gị music n'ọbá akwụkwọ na otu Pịa.
Launching usoro ihe omume
Mgbe echichi nke a iTunes transfer ngwá ọrụ, i kwesịrị imeghe ya. N'otu oge ahụ jikọọ gị Apple mpụga ngwaọrụ nke ị ga-eji maka transfer na bụ ma ị iPhone, iPad, ma ọ bụ iPod. Nke a software ga chọpụta ma nke ndị a na ngwaọrụ na-egosi ya ndị ị na isi window.
Detuo iTunes a mpụga Apple ngwaọrụ
Mkpa ka ị pịgharịa gaa na "playlist" ke hapụrụ kọlụm. Nke a na-ewetara gị ihu na ihu a set nke nhọrọ n'akụkụ aka nri. Enweta na "Tinye" nhọrọ, nke a ga-emeghe a dobe ala menu. Niile nke gị listi ọkpụkpọ ga-akpaghị aka na-enyocha, ma ị nwere nhọrọ nke unchecking ma ọ bụrụ na ị na-achọghị ụfọdụ n'ime ha. Enweta na "OK" na a usoro ga-ebute usoro nke Iṅomi site na otu ngwaọrụ ọzọ
Ugbu a jikọọ na ngwaọrụ a na ọhụrụ gị na kọmputa na iji a UB USB na ẹkedori TunesGo. Cheta na ị ọhụrụ a na kọmputa ga-enwe a software mbụ arụnyere. The software ga chọpụta gị mpụga ngwaọrụ na-akpaghị aka na-egosi ya na isi window.
Họrọ songs, video, foto ma ọ bụ ihe ọ bụla faịlụ nke gị mkpa nyefee na họrọ nhọrọ "Export," si ebe a ị nwere ike ma idetuo ha gị PC ma ọ bụ iTunes n'ọbá akwụkwọ.
Na mbụ ị ga-emeghe iTunes ngwa na gị isi na kọmputa. Ugbu a imepụta egwu ọkpụkpọ nke ọdịyo faịlụ ị chọrọ ke gị CD.
Ka imepụta egwu ọkpụkpọ ị ga-ịnyagharịa ka listi ọkpụkpọ taabụ n'elu nke iTunes window. Pịa gbakwunyere na akara ngosi na ala n'akụkụ aka ekpe, nke pụtara tinye. Họrọ nhọrọ nke ọhụrụ playlist. Kpọgharia aha gị Playlist na-amalite na-adọkpụpụta gị songs ma ọ bụ albums ka playlist.
Na-ere ọkụ disk
Ozugbo ị na-eme na hotara na mbụ nzọụkwụ, enweta na "mere," na mgbe ahụ ịnyagharịa Njikwa na pịa Ọkụ Playlist disk.
Nke a ga-ewetara gị ihu na ihu a window aha ya bụ apa ọkụ ntọala. Họrọ gị disk burner ugbu a
Ị nwere ike ịhọrọ ọsọ nke ị na-achọ ọkụ nke CD. Nke a ga-ekpebi oge nke ha ga-na-enwu.
Ọkụ gị CD
Fanye ide CD na disk mbanye. Họrọ nhọrọ "na-emeghe na iTunes," na-ere ọkụ malitere. iTunes ejikari na-egosi na ọganihu na n'elu nke ngwa window.
Nyefee faịlụ Site CD gị New Computer
Mgbe gị CD na-nsure ọ ga-ejected-akpaghị aka. Fanye a CD ọhụrụ Computer na idetuo faịlụ gị iTunes nchekwa.
Olee otú iPhone mmekọrịta ọzọ na iTunes n'ọbá akwụkwọ
10 Mara mma iTunes 10 Nnọchi Oyiyi ka Download
> Resource> iTunes> All Ụzọ Nyefee iTunes ka ọzọ Computer